BIYUUFKA WAX KU OOLKA AH EE QORRAXDA - IFTIINKA AMA XAQIIQDA? - WARARKA
Xasuuso erayga "ku dhufo iyo xuduudaha"? Tani waa qiyaas ahaan kiisaska horumarinta farsamooyinka ku salaysan nanoparticle.
Mararka qaar waxa ay u muuqataa in saynisyahannada ay baddaleen aasaaska caalamiga ah, oo ku khasbaya shuruucda jimicsiga aasaasiga ah in ay siiyaan bini aadamka. Waxyaabaha xiisaha leh waxay ka muuqanayaan isku xirka bayoolajiga iyo fiisikiska.
Machadka Dhirta Xoolaha ee Akademiyada Ruushka ee Ruushka ayaa soo bandhigay horumar wax ku ool ah oo soo saarka dhirta kiimikada ee ku salaysan nanobiomolecular oo ku shaqeeya tamarta qoraxda.
Natiijooyinka cilmi baarista oo dhammaystiran ayaa laga heli karaa joornaalada.elsevier.com.
Xaaladda joogtada ah ee xaalufka deegaanka iyo horumarka degdegga ah ee dhaqaalaha ayaa u baahan abuuritaanka tamar jaban oo ammaan ah. Hay'adda Sayniska Ruushku waxay bixisaa deeqo horumarineed.
Sida laga soo xigtay saynisyahannada, habka ugu waxtarka badan ee lagu heli karo tamarta jaban waa in la abuuro walxo awood u leh inay sameeyaan sawirro muuqaal ah, sawir-qaadis farsamo ah, oo isticmaalaan iftiinka qorraxda si biyaha loo kala saaro oksijiin iyo hydrogen atomiga. Waxaa la aaminsan yahay in dhismeyaasha qotodheer ee kicinta dabiiciga ah ay aad ugu sii adkeynayaan dhibaatooyinka walaaca marka la barbardhigo prototypical dabiiciga ah.
Ruushku maaha dalka kaliya ee ku soo koraya dhinaca tamarta. Dhowr kooxood oo cilmi-baaris ah ayaa ah cilmi-baaris ku sameeya sawir-qaadis. Shaqadu waxay ku socdaan dhowr tilmaam. Beddelka buuxa ama qayb ahaaneed ee qaybaha bayoolojiga leh dhismooyinka organometallic waxaa loo tixgeliyaa kuwa ugu rajo weyn.
Tani waxay kor u qaadi doontaa dhalidda ee hydrogen iyada oo isla mugga biyaha iyo iftiin la isticmaalo. Saameyntani waxay suurtogal ka dhigeysaa ballaarinta shucaaca shucaaca qoraxda loo isticmaalo. Nano-badalashada molecular ee chlorophyll waxay gaari doonaan natiijooyinka la rabay.
Sida laga soo xigtay qoraaga maqaalkan, Suleiman Allahverdiyev, oo ah qoraaga mashruuca, kooxdu waxay soo saartey xajinimo tijaabo ah oo tijaabo ah oo tijaabo ah, kuwaas oo ka kooban maaddo bir ah. Qalabka nanostructured waxaa loo soo bandhigay polypeptides dabiiciga ah oo ka shaqeeya qayb ka mid ah shaybaarrada dhirta iyo bakteeriyada.
Dhammaan shaybaaradu waxay awoodaan in ay dardar galiyaan qashinka biyaha. Xaqiiqdii, saynisyahannadu waxay abuurayeen sheyga noolaha noolaha si loo soo saaro biofuels.
Hawlaha soo saara hydrogen waxaa loo isticmaalaa wakhti dheer. Hawl-galayaashu waa ilo caadi ah, sida dhuxul ama koronto. Cilmi-baadhayaashu waxay wanaajiyeen nidaamyada sawirro-farsameedka iyadoo la adeegsanayo nanotechnology. Daawadani waxay ku salaysnayd nukotioksit nanocomplexes, kaas oo la dallacay nitrogen.
Qaab dhismeedka soo if-baxday waxaa loo tixgelin karaa analooga qaybaha dhirta waxana uu u shaqeeyaa tamarta Sun-ka. Muhiimada horumarinta ayaa ah mid aan la isku hallayn karin khayraadka tamarta iyo awoodda ay u abuuraan ilaha meelaha aan la daboolin ee meeraha.
Intii lagu guda jiray tijaabooyinka, ma ahan oo keliya shay shaqo oo la sameeyay, laakiin qaab dhismeed oo awood u leh inuu shaqeyn karo 14-15 maalmood. Cilmi-baaristu waxay muujisay suurtagalnimada in wax laga beddelo chlorophyll iyada oo la helo hanti gaar ah - nanokomplex ayaa awood u leh inuu nuugo sawirada hoose ee tamarta.
Cilmi-baadhayaashu waxay qorsheynayaan in ay sii wadaan shaqadooda si ay u ballaariyaan shucaaca shucaaca ee nuugay: faro guduudan, oo u dhow degaanka kuyaala.
Daraasaddan waxaa si wadajir ah ula yeeshay Jaamacada Tabriz iyo jaamacadaha, Jaamacada Australiya ee Tiknoolajiyadda, Jaamacadda Marburg. Isticmaalka dadaalada wadajirka ah ayaa muujiyay fursad dhab ah si loo abuuro shaybaarro shaqeyn muddada gaaban.
Waxaa laga yaabaa in ugu dhakhsaha badan, sanduuqyada aan joogtada ahayn ee Sahara ama Gobi lagu dabooli doono nanostructures oo wax laga beddelay, oo bixiya biofuels jaban.